Somalia: Maxaa Weerarkii Zoobe loola barbardhigay Sept.11 | Midnimo Online | Somalia News and Media
Home Somali News Somalia: Maxaa Weerarkii Zoobe loola barbardhigay Sept.11
Somalia: Maxaa Weerarkii Zoobe loola barbardhigay Sept.11
Mogadishu (Midnimo) Xasuuqii Bishaan Octobe4 14-keedi ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, waxaa laga joogaa isbuuc, Xasuuqaas oo inta la xaqiijiyay ay ku dhinteen in ka badan 350 ruux oo shacab ahaa, ayaa waxaa lala barbardhigay weerarkii Sept.11 Al-Qacida ku qaaday dalka Mareeykanka.
Weerarkii Sept.11,2001, ayaa isbadal weyn ku keenay siyaasada Mareeykanka, waxaana uu weerar is xulufeysi ah ku qaaday Dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, sidoo kale Mareykanka ayaa xanibaad dhaqaale iyo mid siyaasadeed kusoo rogay dalal badan iyo Hay’ado ka shaqeeya dhanka gargaarka, kuwaasoo uu ku eedeeyay ineey taageeraan kooxaha argagixisada.
Hadaba weerarkii Zoobe oo loo badinayo in al-shabaab ka dambeysay, ayaa waxeey quburada qaar qabaan inuu noqon doono mid waa cusub u fura Soomaaliya, islamarkaasna meel qura uga soo wada jeestaan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab.
Xasuuqii Zoobe, ayaa loo aqoonsaday mid kamid ah weerarada argagixiso kuwii ugu qasaaraha badnaa ee Caalamka ka dhaca, inta ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantay ayaa gaaraya ilaa 700 ruux, sidoo kale waxaa jira dad ka badan 50 kuwaasoo nolol iyo geeri lagu hayn.
Dadka Muqdisho oo si weyn uga falceliyay dhacdadaan:
Shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo ay inta badan saameyso weerarada al-shabaab, ayaa Xasuuqii Zoobe kadib isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada iyagoo ka dhiidhinaya falkaas wuxuushnimada ah, waxeeyna muujiyeen isku duubni iyo ineey garab taaganyihiin Ciidamada Doowlada.
Inkastoo dad badan oo qiimo lahaa ay ku dhinteen weerarkaas, hadana waxaa jira dad qisooyinkooda ay si gaar ah u taabatay quluubta shacabka Soomaaliyeed, waxaana kamid ahaa Maryan Abdullaahi, taasoo dhawaan dhameeysay Jaamacad islamarkaasna maalinka weerarkaas maalinka ku xigay isku diyaarineysay xaflada Qalin-jabinteeda, sidoo kale waxaa murugo lahayd in aabaheed oo kasoo kicitamayay London si uu uga qeyb galo Xaflada Farxadeeda uu kasoo qeyb galay duugteeda.
Sidoo kale dadka ku dhintay waxaa kamid ahaa 3 Soomaali-American ahaa, kuwaasoo lagu kala magacaabayay Abukar Dahie (Virginia), Ahmed Abdikarim Eyow (Minnesota) and Mohamoud Elmi (Ohio).
Xasuuqii Zoobe ayaa ahaa midkii ugu xumaa ee ka dhaca Geeska Afrika islamarkaasna argagixisada fuliso, sidoo kale waxa uu noqon doonaa mid aan sanadaha soo socda ka go’in quluubta Soomaaliyeed.waxaana intii ku dhimatay ilaah uga baryeeynaa Janatul Fardowsa inta ku dhaawacantayna ilaaheey Caafiyo…Aamiin Aamiin..Aamiin.
Waxaa Diyaariyay Bashiir Addow Ahmed